सिरानीमा हनुमानचालिसा राखेर सुत्नुहोस हुन्छ यस्तो अपत्यारीलो फाईदा ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
सिरानीमा हनुमानचालिसा राखेर सुत्नुहोस हुन्छ यस्तो अपत्यारीलो फाईदा ! जानी राखौ
Published :7March, 2020 2:26 pm
रातिको समयमा निन्द्रा नलाग्ने स म स्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।व्यस्त जीवनशैली, त नाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने स म स्या रहेका छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थले भने सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि रातिको निद्रासँग ग हिरो सम्ब न्ध रहने बताउँछ । राति राम्रो निद्रा परेन भने शरीर आल श्य बन्छ ।दिनभर थकानको अनुभव हुन्छ । त्यसैले दिनभरको थकान मेटाउन राति निद्रा अर्थात रातभरीको विश्रामले मात्र सम्भव छ । दिनभरीको सुख शान्तिका लागि सुत्ने समयमा सिरानी मुनी यी पाँच चिज राख्नु उत्तम हुने शास्त्रले बताउँछ ।
हनुमान चालिसा=हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरका ण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा ड र, त्रा स र अ हं कार हट्छ भने सपना समेत राम्रो देखिन्छ ।जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥रामदूत अतुलित बल धामा।अंजनिपुत्र पवनसुत नामा ॥
फलामको उपकरण=भुत–प्रेत, ऐठन हुने समस्या छ भने राति सुत्नेबेला सिरानमुनि फलामको कुनै चिज राखेर सुत्नु उपयुक्त मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । बालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँ ची वा च कु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण रहेको पाइन्छ । बालबालिका सुत्ने खाटको सिरानमुनि फलामबाट बनेका चिजहरु राखेपनि धार भएका वस्तुहरु राख्नु हुँदैन ।
भगवानलाई अर्पण गरिएको फूल=सुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शा न्ति प्राप्त हुने शा स्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ज्यानमा पुनर्ताजगीको आभाष हुने शास्त्रमा बताइएको छ । पछिल्लो समयमा थेरा पीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।
दुर्गा सप्तसती पाठ=दुर्गा सप्तसती पाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मु क्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने विश्वास गरिन्छ ।मुला=सिरानी मुनी राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिव लि ङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिल्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । शास्त्रका अनुसार यसले रा हुको प्र भावलाई कम गर्छ र ख राव सपना वा मा नसिक तना व हुनबाट मु क्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।